Akeredolu Kewapụrụ Onwe Ya na Mba Yoruba ma gosipụta Nkwado Maka United Nigeria
Politics Nwere ike 23, 2021
Foto dị na Gọvanọ Ondo Steeti, Oluwarotimi Akeredolu.
Gọvanọ nke Ondo State, Oluwarotimi Akeredolu agọnahụla nkwupụta na ọ na-akwado mba Yoruba.
Otú ọ dị, o gosipụtara nkwenye ya na Nigeria siri ike, dị n'otu, na nkewa, dịka Forumtù Ndị Ọchịchị Ndị Gọọmenti chọrọ.
E gosipụtara ọnọdụ Gọvanọ Akeredolu na nkwupụta ewepụtara na Sọnde mgbe ọ gbakọtara na Akure, isi obodo steeti ahụ.
Dị ka Olatunde si kwuo, ụfọdụ ndị sonyere na ngagharị nke Satọde kwuru na ha natara nkwado site n’aka gọvanọ maka njem a na-akpọ maka iweghachi ala Yoruba.
Ọ kọwara na ikike gọvanọ nyere ikike mmadụ na ndị otu dị iche iche ime mgbakọ udo bụ nke a kọwara n'ụzọ na-ezighi ezi dịka nkwado maka ebumnuche nkewa, na-ekwusi ike na nke a abụghị ikpe.
Onye enyemaka gọvanọ ahụ kwuru na ọnọdụ gọvanọ na nnọkọ Akure bụ naanị iji gosipụta na ọ naghị emegide ụdị ọgbaghara ọ bụla nke na-emebi iwu nke ala ahụ.
O kwusiri ike na Gọvanọ Akeredolu, onye bụkwa Onye isi oche nke Nzukọ Ndị Gọọmenti South-West, akwadobeghị ọchịchọ nke mba Yoruba na mpụga Nigeria, na ndị na-akwalite mgbasa ozi enweghị nkwado gọvanọ.
Na ngagharị a, Sunday Adeyemo, onye ọtụtụ mmadụ maara dịka Sunday Igboho, bụ onye na-agba mbọ maka ikike dịrị onye Yoruba, kọọrọ na o kwuputara na Gọvanọ Akeredolu maara ma kwado mkpalite ha na-agba maka ala Yoruba.
Ihe ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke onye enyemaka gọvanọ kwuru:
Ndị Agọ Editọ Mba Yoruba Onwe Ha - Akeredolu
Onye isi ochichi nke Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, SAN mara na ndi otu mmadu mere ngagharị iwe n’okpuru ihe ha kpọrọ ‘secitionist agitations’ na Akure na Satọdee, 22 Mee 2021, n’enweghi nsogbu. kwuru na ya nwere nkwado ya maka nzukọ a.
Gọvanọ Akeredolu chọrọ ikwu hoo haa na ọ bụ ezie na ọ na-ekweta ikike ndị mmadụ n’otu n’otu na otu dị iche iche nwere ime mgbakọ udo, na a ghaghị ịghọtahie ya ịpụta nkwado maka ebumnuche nkewa na ma ọ bụ nzụkọ mba ahụ. N'ebe ya.
N'enweghi mgbagha, echiche nke Gọvanọ banyere nnọkọ Akure ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, bụ naanị na ọ naghị emegide ngagharị iwe ọ bụla nke na-emebi iwu nke mba ahụ.
O kwenyeghi ma ọ bụ kwado nkwado maka mba Yoruba na mpụga nke Nigeria dị ka agbasoro ya.
Gọvanọ Akeredolu na-eguzo n'akụkụ oke egwu, nke dị n'otu, na nkewa nke Naịjirịa dịka ndị gọọmentị ndịda chọrọ.
Ya mere, ume, ịnụ ọkụ n'obi, ndu, na eziokwu nke Gọvanọ Akeredolu gosipụtara maka Naijiria ziri ezi na nke ziri ezi bụ nke afọ ofufo ma bụrụ nke sitere na ịhụ mba n'anya maka mba ahụ, yana ịhụnanya maka ndị ya, agbụrụ agbụrụ Yoruba.
Ya mere, ọ dị mkpa ikwupụta na-enweghị nkwekọrịta ọ bụla na ndị na-akwalite ndị na-agba mbọ na mba Yoruba enweghị aka mgbazinye ego ọ bụla na Gọvanọ Akeredolu.
Chief Press Secretary nke Gọvanọ nke Ondo State.
Onyeisi nke Bida na-ekwupụta ụjọ banyere ebubo ịtọrọ mmadụ ise wee kpọkọta nzukọ mberede Nwere ike 29, 2021
Tags:akeredolu, eziokwu, gọvanọ steeti ondo, Sunday igboho